प्राथमिकतामा विकास बजेट तर कार्यान्वयन सुस्त - Karobar National Economic Daily
प्राथमिकतामा विकास बजेट तर कार्यान्वयन सुस्त
query_builderJanuary 17, 2017 10:54 AM supervisor_account visibility995
समयमै बजेट नआएका कारण विकास खर्च नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू उम्कने गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट आएको थियो ।
त्यसैअनुरूप साउन १ गतेदेखि सबै निकायमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको भए पनि अझै विकास खर्च बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । चालू वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेट ३ खर्ब ११ अर्बको ११.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यसमा पनि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ त पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको छ । अहिलेसम्मको खर्च संरचना हेर्दा पुनर्निर्माणको काम पनि प्रभावकारी रूपमा भएको छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
चालू वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छैन । पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युत् आपूर्ति पनि सहजतातर्फ उन्मुख देखिन्छ, तर पनि सरकारी खर्च बढ्न नसकेर ठूलो रकम ढुकुटीमा बसेको छ । सरकारी बढ्न नसकेको अवस्था र बढाउन चालिनुपर्ने कदमका बारेमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानी :
अर्थलाई दोष दिएर उम्कने स्थिति छैन
हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा अर्थमन्त्रालयको आलोचना हुने गरेको छ । सामान्यतया अर्थमन्त्रालय आफैंले खर्च गर्दैन । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनकर्ताका हिसाबले अर्थमन्त्रालय चोखो रहँदैन ।
चालू वर्ष पुनर्निर्माणको वर्ष पनि भएको र त्यसले पुँजीगत खर्च बढाउने र आशातीत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासम्म खर्चका हिसाबले सन्तोष गर्ने आधार भेटिँदैन ।
बजेट खर्च गर्ने निकायहरूले सधैं बजेट ढिला आएको र समयमा अख्तियारी नजाँदा विकास खर्चमा समस्या देखिएको बताउने गरेका थिए ।
तर, चालू वर्ष बजेट आगमनका हिसाबले अत्यन्तै उत्साहित वर्षका रूपमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक भएको र आर्थिक वर्षको सुरुको दिन साउन १ गतेबाट खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित निकायलाई दिइसकिएको थियो ।
त्यसैगरी विगत वर्षहरूमा पर्याप्त खर्च गर्न नसक्नुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो । चालू वर्षको सुरुमै नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यसको समस्या पनि नभएको मान्न सकिन्छ । तर पनि खर्च प्रशासनमा अपेक्षित सुधार नहुँदा २ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । धेरै रकम सरकारी ढुकुटीमा रहँदा वित्त बजारमा तरलता (लगानीयोग्य) रकम अभावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले उठाउने राजस्व पनि खर्च गर्ने क्षमता नराख्नु विडम्बनापूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायका हिसाबले अर्थमन्त्रालयले हरेक मन्त्रालय÷निकायलाई बजेट खर्चन भरपुर सहयोग गरिरहेकै छ । सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायलाई खर्च नहुने क्षेत्रबाट खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर परिणाम दिने गरी काम अघि बढाउ भन्दा पनि सकारात्मक परिणाम देखिएन, जसले गर्दा पुससम्म पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको १५ प्रतिसत पु¥याउने लक्ष्य पनि खुम्चियो ।
यसो हुनुमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले पुँजीगत खर्चका लागि सक्रिय भएको आभास देखिएन र उनीहरू पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ समन्वय गर्न तत्परता देखाएको स्थिति छैन ।सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयन जहिले पनि प्राथमिकताको विषय हो । तर, यथार्थमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको पाईंदैन ।
अर्थमन्त्रालय एक्लैले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हुँदैन र एक्लै कार्यान्वयन गर्ने पनि होइन । अर्थले सहजकर्ता÷समन्वयकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । पुँजीगत बजेट अत्यधिक हुने निश्चित मन्त्रालय छन् र उनीहरूले पुँजीगत बजेट खर्चनका लागि विशेष अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले खर्च नहुने आयोजनाका रकम ठूला सक्रिय आयोजनामा खर्च गर्न र साना तर परिणाम दिने आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । अर्थमन्त्रालय खर्च बढाउन निरन्तर अनुगमन, सहजीकरण र साधन स्रोतको घनीभूत व्यवस्थापनमा लागेको छ ।
दोस्रो चौमासिक (फागुन) सम्म ६० प्रतिशत खर्च गर्ने र अन्तिम चौमासिकमा अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने भए पनि नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक र त्यसमा पनि अन्तिम दुई महिनामा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि विकास बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।
आफू जिम्मेवारी नलिने र अरूलाई दोष देखाएर उम्कने प्रवृत्ति विकराल छ । साधन स्रोतका विषयमा अर्थमन्त्रालय सचेत छ र स्रोत नपुग्ने स्थितिमा थप व्यवस्था गर्न तयार छ । साधन स्रोतबाहेकका काममा अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिएर अब उम्कने स्थिति छैन ।
बजेटबाहेकका कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, स्थानीय स्तरका समस्या, आयोजनाको समस्यालाई केलाउने र कुन निकायले ती काम गर्नुपर्ने हो प्रत्येक निकायगत समन्वय अर्थमन्त्रालयले गर्दै आएको छ र गर्छ ।
अनुगमन प्रणाली कमजोर हुुदा समस्या
चालू वर्षको कुल खर्च नै अत्यन्तै कमजोर छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै न्यून ११.३ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्ष २०७२ वैशाखको भूकम्प र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि भएको भारतीय सीमा नाका अवरोधका बाबजुद पनि विनियोजित रकमको ७.१८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
त्यसअघिको वर्षमा १२.६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा प्रायःजसो पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर स्थितिमा छ भन्न सकिन्छ । पुँजीगत खर्च मात्र होइन, कुल खर्च पनि कम हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ र त्यसको विशेष अर्थ रहन्छ ।
चालू खर्चमा देखिने अनुदानको रकम खर्च हुन सकेको छैन, थन्केर बसेको छ । यस्तो खर्च नहुँदा राज्यले सेवा–सुविधा जनतासम्म पु¥याउन नसकेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले समग्रमा नतिजा निराशाजनक देखाउँछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि निराशाजनक हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
यति मात्र होइन, वित्त व्यवस्थामा पनि बजेट खर्च नहुनुको असर देखिन्छ । वित्तीय परिचालनमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्न जान्छ । यो वर्ष विगतमा जस्तो बन्द–हड्ताल छैन । लोडसेडिङको असर पनि घटेर गएको छ, तर पनि बजेट खर्चमा समस्या देखियो । यसो हुँदा विकासले गति लिन सकेन ।
किन गति लिएन त विकासले ? किनकि खर्च भए÷नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने एजेन्सीहरू नै खेल्ने अवस्था सिर्जना भयो । अनुगमन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्रका अनुगमन प्रतिवेदनहरू नै कार्यान्वयनमा समस्या देखिए । संसदीय समितिकै प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्, अनि कसरी प्रभावकारिता बढ्छ ?
मुलुक विकासको गतिमा कसरी अगाडि बढ्छ ? यो वर्ष बजेट पनि जेठमै आएको हो । सामान्य अवस्थामा पनि यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । राजस्व पूरै आउने तर खर्च नहुने ? जबकि राजस्व आफैं प्रणालीमा आउने हो । यसो हुनुको प्रमुख कारण प्रशासन अप्रभावकारी हुनु हो भने प्रशासन संयन्त्रको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सक्षमता नै नदेखिनु हो ।
राजनीतिक दलले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । हामीले यस्तो समस्या आउन नदिन म अयोगमा सदस्य रहँदा मध्यकालीन खर्च संरचना लागू हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेका थियौं, बजेटमा सुधार गरेका थियौं, बजेट खर्चको म्यानुयलमा सुधार गरेर लागू गरेका थियौं । तर, अहिले ती लागू भएको देखिएन ।
खर्चको दर बढाउने र साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने यसरी चल्दैन । ‘हट स्टक’ सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई तुरुन्तै पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दण्डित भएको सरुवा होइन, हायर एन्ड फायरकै अवस्था हुनुपर्छ । कुनै परियोजना ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ भने त्यसभन्दा ढिलो हुँदाको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कामको जिम्मेवारी क्यालेन्डर बनाएर, कार्ययोजना बनाएर निर्देशन दिनुपर्छ । नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने यो प्रशासनले काम गर्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गरियो भने पनि गुणस्तरीयताको प्रश्न आउँछ । मुलुक अर्थतन्त्रमा कमजोर बन्दै जान्छ, अन्तिममा सबै दोष राजनीतिक दलमा फर्कन्छ ।
मान्छेमा असन्तुष्टि बढ्छ, नेतृत्वको इमेजमा असर पार्छ । अन्ततः लोकतन्त्रमा असर गर्छ । समग्र अर्थतन्त्र नै झन्–झन् कमजोर बन्दै जान्छ । त्यसैले समय रहँदै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
अर्धवार्षिक अवधिमा क्षेत्रगत खर्चको तुलनात्मक स्थिति (प्रतिशतमा) (बार डायग्राममा बनाउने)
आर्थिक वर्ष कुल खर्च चालू खर्च पुँजीगत खर्च वित्तीय व्यवस्था
२०७३/७४ २६.१९ ३५.४२ ११.३ १७.३८
२०७२/७३ २१.९४ २८.९८ ७.१८ १९.३७
२०७१/७२ २६.२ ३०.९५ १२.६ २३.१९
सरकारी खर्च नहुँदा महंगी बढ्छ
सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बसेकाले वित्तीय प्रणालीले तरलता संकुचनको समस्या भोग्नुपरेको छ । सरकारले करको नाममा लिएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य) पुँजीको अभाव बढ्दै गएको छ ।
सरकारले विकास खर्च गरेमा ‘होल्ड’ भएर बसेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउने थियो । वित्तीय प्रणालीले पनि राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलता कम छ । ठूलो रकमको कर्जा माग गर्दै आएका ग्राहकलाई तत्कालका लागि कर्जा दिने नसक्ने भन्दै फर्काउनुपरेको छ ।
केही दिनअघि सिमेन्ट उद्योग खोल्नका लागि कर्जा माग्दै एउटा समूह आएको थियो । तर, हाल तरलता नभएकाले कर्जा दिन नसक्ने भन्दै फर्काइएको छ । त्यो सिमेन्ट कम्पनीलाई कर्जा दिन सकेको भए कम्पनीले उत्पादन सुरु गथ्र्यो । बिक्री–वितरण गथ्र्यो । सरकारलाइ कर तिथ्र्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सानो योगदान गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले कर लिएको छ, लगेर राखेको छ । त्यसरी अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रने निश्चित छ ।
सरकारले आफूसँग भएको रकम खर्च गरेमा रकम पुनः वित्तीय प्रणालीमा आउने थियो । यसरी वित्तीय प्रणालीमा ठूला रकम परिचालन हुँदा तरलता छैन भनेर ग्राहक फर्काउनुपर्ने थिएन । यसबाट अर्थतन्त्रले नियमित काम गर्न सक्ने वातावरण पैदा गथ्र्यो । पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायले करका रूपमा ठूलो रकम तिरेका छन् ।
तर, त्यो रकम सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण वित्तीय प्रणालीको भएको रकम सरकारी ढुकुटीमा गएर थन्किएको छ । अहिले पनि साढे २ खर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमा बचतमा छ । यति ठूलो रकम खर्च भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पाथ्र्यो होला ? यसले मुलुकको आर्थिक विकासको चाहना पूरा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न थोरै भए पनि सघाउ पुग्थ्यो ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि उद्योगधन्दा खोल्ने तथा पुँजी परिचालन हुने अवस्था नहुने भएकाले त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई कर्जा दिन नै गाह«ो छ । तर, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकसँग केही लगानीयोग्य पुँजी भए पनि कृषि विकास बैंकसँग समेत यस्तो रकम नभएको स्थिति छ ।
वित्तीय प्रणालीको तरलता समस्या समाधान गर्ने भनेर कन्द्रीय बैंकले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरेको भए पनि त्यो रकममा बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् । अहिले बैंकहरूलाई नगद सञ्चिति अनुपात कायम गर्न खासै समस्या नरहे पनि लगानीयोग्य रकमका लागि ठूलो समस्या छ ।
सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा महँगी बढ्ने निश्चित छ । तरलता अभाव भएकाले बैंक कर्जाको ब्याजदर धेरै छ । धेरै ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा त्यसको असर उपभोक्तालाई पनि पर्छ । निक्षेपमा पनि धेरै ब्याज दिनुपरेको स्थिति छ ।
निक्षेपकर्ताको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज बढ्नु स्वाभाविक हो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा योजना निर्माण गर्ने समय तथा लागतमा असर गर्ने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले कर उठाइसकेपछि लिएर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गरेको खण्डमा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या दोहोरिने थिएन ।
काम नगर्ने परम्परा हाबी भयो
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४५ दिनअघि नै बजेट आयो । तर, आधा समय गुज्रिसक्दा एकचौथाइ बजेट मात्रै खर्च भयो । विकासका आयोजना बनाउन छुट्ट्याइएको पुँजीगत खर्च त झन् ११ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ ।
यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियागत झन्झट हटाइएकै थियो, नियमअनुसार खर्च गर्न पाउने अख्तियारी पनि बजेट घोषणासँगै प्रदान गरिएको थियो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै तहदेखि बजेट खर्चन सहजीकरणको काम पनि भएकै हो । तर, खर्च स्थिति फेरि पनि निराशाजनक छ । यी सबै अवस्था विश्लेषण गर्दा बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रमा रहेको परम्परा नै मुख्य बाधक देखियो ।
बजेट ठूलो आकारको माग्ने, तर आयोजना तयारी हालतमा नराख्ने, मानव संसाधन (आवश्यक दक्ष कर्मचारी) व्यवस्थापन गर्नै नचाहने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सक्ने जुन परम्परा छ, अहिले पनि कर्मचारीतन्त्र त्यही परम्परा धान्न लागिपरेको देखियो । कुनै परियोजनामा बजेट विनियोजन भएपछि समयतालिका बनाएर यो अवधिभित्र यो काम सक्ने र विकास प्रतिफल समयमै हात पार्ने इच्छाशक्ति कर्मचारीतन्त्रमा देखिएन ।
अघिल्ला वर्षमा झैं बजेट आएपछि मात्रै कार्यक्रमको तयारी थाल्ने, बजेट बढ्दा पनि कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक क्षमता नबढाउने तथा अन्तरसरकारी समन्वयमा सम्बन्धित तहबाट कुनै पहल नगर्ने प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नीतिगत तहबाट सहजीकरण भइरहेको छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले तयारी गरिरहेका छन् । चौमासिक लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सम्बन्धित निकायलाई आयोग र अर्थले आग्रह गरिरहेको छ । खर्च गर्न नसक्ने निकायका प्रमुखहरूलाई समयमै जानकारी गराउन र खर्च नहुने परियोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर गराउन विशेष पहल भइरहेको छ ।
गोष्ठी र सेमिनारका नाममा खर्च बढाउने प्रवृत्ति रोक्न वैशाखपछि यस्ता कार्यक्रममाथि बन्देज नै लगाउनेबारे निर्णय गर्दैछौं । यसो गर्दा खर्च बढाउन परियोजनाहरूको भौतिक काममै केन्द्रित हुन विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूलाई दबाब पर्नेछ । साथै, पछिल्लो पटक ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ ।
निर्माणस्थल र अन्य प्रक्रियागत चरणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं यस्ता परियोजनाको अनुगमनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनको अनुगमन आयोगका सदस्यतहबाटै गरिँदैछ । यस्तो अनुगमनले ठूला परियोजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत पुगेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका विकाससम्बद्ध ऐन–कानुनमा सहजीकरण भएका कारण पछिल्ला महिनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहज भएको छ । अन्य नीतिगत सहजीकरणमा पनि आयोगले विशेष क्रियाशीलता देखाएको छ । जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरण ऐनका कारण आयोजना रोकिने अवस्था आउनै नदिन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको छ ।
आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिँदै छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रूपमा सफल पार्न र कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेट खर्चन सकिन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ ।